Dynamic Web Site လုပ်နည်းသိချင်လို့ပါ။ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Programming Languages -2» AJAX » ဆွေးနွေးချက်များ
Dynamic Web Site လုပ်နည်းသိချင်လို့ပါ။
28-05-2008, 02:30 AM
ပို့စ် 10 ခုအတွက် 61 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Dynamic Web Site တစ်ခုလုပ်ချင်ရင် ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ Dreamweaver, php,MySQL, Apacheတို့နဲ့လုပ်ရတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ Web Hosting ကိုရောဘယ်လိုလုပ်ရပါသလဲ၊ ဒါတွေကို လေ့လာဖို့ မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေရှိရင် ညွှန်ပြပေးပါဦး၊ သိသူများကလည်း သင်ပြပေးပါဦး၊
Find More Posts by ကောင်းကောင်း
28-05-2008, 02:32 AM
ပြန်စာ - Dynamic Web Site လုပ်နည်းသိချင်လို့ပါ။
နေရာမှားပြီး post တင်လိုက်မိပြီ၊ ကိုဂျစ်တူးရေ ရွေ့ပေးပါဦးဗျ။
29-05-2008, 03:27 PM
ဒီနေရာကိုရွှေ့ပေးလိုက်တယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဆိုက် တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး ဒီပို့စ်မှာ အရင်နားလည်အောင်လေ့လာပါ။
ဖရီးဟို့စ် တွေအများကြီးပါ အဲ့ဒီမှာ စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရတယ်။ အောင်မြင်ပါစေ။ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
29-05-2008, 04:18 PM
ကိုရေခါးရဲ့ post တွေကို ကျွန်တော်ဆက်လေ့လာနေပါတယ်...
25-06-2008, 03:21 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: May 2007
ပို့စ် 367 ခုအတွက် 1,784 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
macromedia flash player လေးလဲလိုတာပေါ့... banner လေး လှပဘို့က...
www.multiply.com မှာ နဲနဲ ကလိကြည့်ပါလား...
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ maJunior အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by maJunior
25-06-2008, 03:24 PM
Dreamwaver က သီချင်းတွေကို သိပ်မသိဘူးလို့ထင်တယ်..ဒီတော့ HTML လေးလဲ ရမှ...code လေး နဲနဲဝင်ရေးတတ်ဘို့လိုတယ်..
27-06-2008, 07:35 AM
ပို့စ် 80 ခုအတွက် 340 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by ကောင်းကောင်း
ဒိုင်းနမစ်ဝက်ဆိုက်ကို မပြောခင် static website အကြောင်းအရင်ပြောရပါမယ်..
ဟိုးအရင်က http protocol ကို html language တမျိုးတည်းကိုပဲသုံးပြီး static page တွေနဲ့ပြပါတယ်..ဆိုလိုတာက ပုံတွေ စာတွေကို html code တွေသုံးပြီး နေရာချရေးထားတာကို ပြန်ပြရုံပါပဲ.. ခုခေတ်ကတော့ အဲဒါကို traditional web pages စာရင်းသွင်းလိုက်ပါပြီ..
Dynamic pages အကြောင်းကတော့ .dynamic webpage ဆိုတာ animation ပုံတွေ..flash ပုံလှလှလေးတွေ သီချင်းတွေကို ထည့်ထားလို့ခေါ်ဆိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး...ပုံတွေ စာတွေ flash ပုံလှလှလေးတွေ သီချင်းတွေကို နေရာချဖို့ ပေါ်ပေးဖို့က html အလုပ်ပါ..ဒါပေမယ့် အဲဒီ စာတွေ ပုံတွေက ခေါ်တင်ဖို့က အသေကြီးရေးမထားတော့ဘူး..အရှင်ဖြစ်နေအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.. အရှင်ဖြစ်နေအောင် database (oracle,mysql,pgsql,sql,etc) တွေကို သုံးပြီး
extensible language (xml,xhtml,etc) , dhtml, css ----W3c Validation,
scripting language (js,vbs,etc)တွေ
server sided language (php,asp, jsp, dreamweaver action script ,cold fusion ,etc ) တွေ ကိုသုံးပြီး ပြုလုပ်ထားသည့် web portal (yahoo,msn, etc)
sharing ( youtube, yousendit,mediafire,rapidshare ,etc), mail ( gmail, hotmail, yahoomail,etc,,) online shoping (amazon, etc ) banking (paypal, etc ) တွေကို dynamic web sites များလို့ခေါ်ပါတယ်.. youtube ကို ကြည့်ပါ..
ကျနော်တို့ ကြည့်ချင်တဲ့လင့်က flash movie ကို ပဲပေါ်ပေးမှာပါ..အသေရေးထားတဲ့ web page မဟုတ်ပါဘူး... ဒီဖိုရမ်ကို ကြည့်..ကျနော် ပို့စ်ကို အရင်ကတည်းက ရေးတင်ထားခြင်းမရှိပါ..ကျနော်ရေးပြီးမှာသာ .လင့်ရယ် စာတွေရယ်ကို php+html +Mysql ပေါင်းပြီး database မှာ သိမ်းလိုက်ပါတယ်.. လိုတဲ့သူက လာကြည့်မှသာ ပြန်ပေါ်ပေးပါတယ်..
ခုနောက်ပိုင်းမှာ dynamic webpage တွေကို loading မြန်အောင်လို့
ajax technology ကို အသုံးပြုပါတယ်.. လိုအပ်တဲ့ ဒေတာလေးကိုပဲကွက်ပြီး Load လုပ်တာကိုအရေးပေးထားတဲ့ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်..ဥပမာ gmial..
မေးလ်ကနေတခုခုကို ကလင့်တာနဲ့ web page တခုလုံးကို loading မလုပ်တော့ပဲလိုတာလေးပဲ database မှာ ယူပြီး ကိုယ့်ဆီပြန်ရောက်လာပါတယ်..
ajax chat ...အဲဒါမှာ ကျနော်တို့ ရိုက်တာလေးပဲ ကွက်ပြီး database ကိုပို့ပြီး ပြန်လာပေါ်ပေးပါတယ်.. ဒီဖိုရမ်ရဲ့ Thanks button ကိုကြည့်..နှိပ်လိုက်တာတဲ့
၀က်ဆိုက်ကြီးတခုလုံးကို ပြန်မခေါ်ဘူး..လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာ ကိုယ့်နာမည်လေးသွားပေါ်နေပြီ.. အဲဒါ ajax ပါ။
ဒီလောက်ဆို static web page နှင့် dynamic web page ကို နားလည်လောက်ပါပြီ..
ိdynamic web ကိုပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လေ့လာရမှာတွေက
server side scripting lang
scripting lang ( js,and others)
some java applet,servlet (if needed)
some action script (like coldfusion)
web developer လုပ်မယ်ဆိုရင် အကြံပေးချင်တာက ajax ကိုပိုင်အောင်လုပ်ပါလို့..
(မှတ်ချက်။ ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော်ဟု ယူဆချက်ဖြင့် ရေးသားခြင်းသာ ဖြစ်သည် အားလုံး အမှန်လို့မယူဆစေလိုပါ)
[I][B][COLOR="Navy"]This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.[/COLOR][/B][/I][/SIZE]
Last edited by yeakharr; 27-06-2008 at 01:50 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ yeakharr အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by yeakharr
31-05-2010, 11:04 AM
ပို့စ် 78 ခုအတွက် 302 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်က web ကိုအခုမှစလေ့လာတဲ့သူပါ။ ၀ါသနာလည်းပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်က chemistry ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်နဲ့အလှမ်းဝေးပါတယ်။
သင်တန်းတက်ချိန်လည်းမရှိပါဘူး။ အစ်ကိုတို့အစ်မတို့ရေးတဲ့စာတွေကို ရတဲ့အချိန်လေးမှာလေ့လာခွင့်ရတာပါ။
ကျွန်တော်စလေ့လာတော့ wemp sever နဲ့ Dream waver ကိုထိတွေ့ခွင့်ရပါတယ်။
်free host တစ်ခုကနေ domain name နဲ့ ပဲ site တစ်ခုတင်ကြည့်ထားပါတယ်။
ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပါ။ သူပေးတဲ့ templete ထဲမှာ photo,Video,calendar,Member, links,forum .
ဆိုပြီး ပါပါတယ်။ interface တော်တော်များမျာကိုတော့ ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။
data base နဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့
ဥပမာ။ ။ site ကိုလာရောက်တဲ့သူတွေရဲ့ အရေအတွက်, Ip address, အစရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေ သိဖို့ တစ်ချို့ php, html, code တွေကို ထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာလုပ်ဆောင်ခြင်းမတွေ့ရပါဘူး။
error တွေတက်လာပါတယ်။ member list ကိုတော့ maintainance လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်။ ဘယ်လိုကြောင့်ဆိုတာ လမ်းညွှန်သင်ပေးကြပါဦးနော်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဟိန်းသက်အောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဟိန်းသက်အောင်
Joomla ကိုဘယ်လိုဖန်တီးတယ်ဆိုတဲ့ Ebook ရှိလားခင်ဗျာ everlearner E-books များ 31 11-09-2011 01:46 PM
Ftp Site for Ebooks ကိုပိုင် E-Books & Tutorials215-05-2008 10:55 AM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 09:25 AM